FITSARAM-BAHOAKA : Lehilahy nodorana velona miaraka amin’ ny tranony avy eo nokapakapaina famaky - Informations et Actualités sur Madagascar
Société FITSARAM-BAHOAKA : Lehilahy nodorana velona miaraka amin’ ny tranony avy eo nokapakapaina famaky
FITSARAM-BAHOAKA : Lehilahy nodorana velona miaraka amin’ ny tranony avy eo nokapakapaina famaky
by Alpha world on 10 h 54 in Société
Tamin’ny fomba habibiana tokoa ny noentin’ireo fokonolona nanampatra ny hatezerany tamin’ity lehilahy iray izay noheverin’izy ireo fa ho olo-meloka.
Tsy vitan’ ny nokapaina tamin’ny famaky fa mbola nodorana velona tao an-trano fonenany ihany koa.
Tao amin’ny Fokontany Faravohitra, Kaominina Tritriva ao anatin’ny Distrikan’ i Betafo no nitrangan’izany ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin’ny 7 ora hariva.
Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana dia nisy lehilahy telo nikasa handrava tovolahy iray izay nifanena tamin’izy ireo teny an-dalana. Avy hatrany dia nosakanan’ireto olon-dratsy ity farany no sady norahonany mba hamoaka ny vola sy entana teny aminy. Nanda anefa ity lasibatra ary niezaka nanohitra ihany koa, ka nitambaran’izy telo ary naratra mafy. Voaroba avokoa ny zavatra rehetra teny amin’ity voaendaka.Samy nody tany an-tanànany avy ireo olon-dratsy telo rehefa nahavita vita ny asa ratsiny. Ny iray tamin’izy ireo dia voalaza fa iray tanàna tamin’ilay tovolahy niharan’ny fanafihana.
Niantso vonjy ity farany no sady nitantara ny zava-nitranga tamin’ireo fokonolona. Tsy niandry ela fa teo noho eo ihany dia nirohotra nihazo ny tokantrano misy ilay voatonona fa nandray anjara tamin’ny fanendahana izy ireo. Raikitra ny horakoraka sy ny tora-bato mba hampivoaka ity heverina ho olon-dratsy tao an-tranony.
Niziriziry tsy nety nivoaka mihitsy anefa izy ka avy hatrany dia nodoran’ny olona avy aty ivelany ilay trano. Nijoajoala ny afo izay efa nananika ny trano iray manontolo mihitsy. Rehefa niitatra izay dia nitsambikina avy eny am-baravarakely ilay lehilahy izay efa nahitana faritra may tamin’ny vatany. Tsy vitan’izay anefa fa mbola notatazan’ny fokonolona avy ato ambany ary mbola nokapain’izy ireo tamin’ny famaky ihany koa ka maty tsy tra-drano vokatr’izany.Ora vitsy taorian’izay vao nigadona teny an-toerana ny Zandary. Hatreto dia mbola ny famotorana sy ny fanadihadiana mahakasika ity zava-nitranga ity.
By Alpha world at 10 h 54